Qaraxyo Isxigay Oo Goor-dhawayd ka Dhacay Magaalada Muqdisho.(Sawiro) – Heemaal News Network
Qaraxa hore oo ahaa gaari waxyaabo qarxa ku xirnaa ayaa ka dhacay agagaarka Daarta Colow Tower ee Isgoyska Dabka, waxaana la sheegay in uu yahay gaari Nooca raaxadda ah oo walxaha qarxa lagu soo xiray.
Gaarigan la qarxiyay ayaa la sheegay in uu lahaa Prof Yaxye Sheekh Caamri, waxaana ku nafwaayay wiilkiisa.
Sidoo kale Qaraxa kale oo daqiiqado ay u dhaxeeyeen ayaa la dhacay dhabarka dambe ee Hotel Maka Al-Mukarama.
Labada Qarax ayaa ahaa nooca baabuurta lagu xiro, gaar ahaan qeybta hoose ee darawalka.
Lama oga khasaaraha rasmiga, waxaana goobta gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Amniga oo goobta xiray.
Dawlada Somaliya Amaray Inay Deg-deg Dalka ku soo Galaan Diblomaasiyiinta Safaaradda Sudan.
Wasaaradda Arrimaha dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah oo fulinaysa amarka Ra’iisul Wasaaraha Xukuummadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku wargeliyay sii hayaha safaaradda, dhammaan diblamaasiyiinta iyo u-qaybsanayaasha ka hawl gala safaaradda Soomaaliya ay ku […]
Ciidamada AMISOM Oo Maanta la Iska Hor-taagay Inay la Wareegaan Ammaanka Xarunta Aqalka Sare.
Ciidamada NISA ayaa is hortaag ku sameeyay Ciidamo ka tirsan AMISOM oo la qorsheynayay in maanta la wareegaan ammaanka Xarunta Aqalka Sare, iyadoo muddo saacado oo Ciidamada ku xanibnaayeen Koontaroolka KM-0 ee Ciidamada NISA ay […]